Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 8)
Apple dia efa manafana ny zoma mainty miaraka amin'ny karatra fanomezana hatramin'ny 200 €
Apple dia efa manafana ny zoma mainty miaraka amin'ny karatra fanomezana hatramin'ny 200 €. Mandra-pahatongan'ny zoma dia tsy ho fantatray izay zavatra ampiharina na ny sandany.
Isan'andro - Inona ireo tamba-jotra MESH ary ahoana no fiasan'izy ireo?
Androany dia miresaka momba ny tambajotra MESH isika, ny teknolojia ho an'ny WiFi an-trano izay tsikelikely ...
$ 1 ho an'ny PRODUCT (RED) isaky ny fividianana ao amin'ny tranokala Apple
Apple dia hanome dolara isaky ny fividianana atao amin'ny Apple Pay, amin'ny tranokala ofisialy, amin'ny fivarotana na amin'ny App Store hatramin'ny 2 Desambra ho avy izao
Isan'andro - Apple mihira ny "Mea culpa"
iOS 13 dia manana laza ratsy eo amin'ireo mpampiasa sy mpamorona, ka mahatonga ny aretin'andoha maro ho an'ny olona manana bibikely ...
Ny iPhone 12 Pro dia mety hanana RAM 6GB
Ny iPhone 12 Pro sy Mac Pro vaovao dia mety hahazo RAM 6GB noho ny fisehoan'ny fakan-tsary vaovao sy ny masolavitra fahefatra
Apple mandefa Apple Music ho an'ny orinasa: Fahazoan-dàlana mozika ho an'ny fivarotana antsinjarany
Apple dia nanangana ny programa Apple Music for Business, sehatra mozika mivantana handefasana mozika manana fahazoan-dàlana amin'ny fivarotana.
Ny CEO CEO Condé Nast Tsy Azo antoka ny Apple News + Ho Hahomby
Ilay goavambe famoahana Condé Nast, dia manamafy amin'ny alàlan'ny tale jeneraliny, fa ny hoavin'ny Apple News + dia tsy dia mazava loatra satria tsy mbola nampiseho izay nampanantenainy izy io.
Apple dia manitatra ny fotoana fiverenana amin'ny fampielezana ny Krismasy
Toy ny isan-taona, Apple dia nanitatra ny vanim-potoana fiverenana mba hahafahan'ny olona mividy ny vokatra alohan'ny Krismasy ary mamerina azy ireo tsy misy olana.
Podcast 11 × 13: Ilay hetsika tsy ampoizin'ny olona
Nanaitra ny rehetra ny Apple tamin'ny hetsika tsy nampoizina tamin'ny 2 Desambra, izay hanana fifantohana tsy ampoizina tanteraka koa.
Ny iOS 13.3 Beta 3 dia mahatratra ny mpamorona, fa koa ny rafitra sisa
Ho fanampin'ny iOS 13.3 Beta 3, misy ihany koa ny tvOS 13.3, macOS Catalina 10.15.2 ary watchOS 6.1.1 betas ka tsy misy zavatra tsy ampy mihitsy.
Nilaza i Apple fa tsy mahavita ariary akory ny fanamboarana azy
Mitandrema, hoy i Apple fa tsy mahazo tombony ara-bola amin'ny fanamboarana izany, mety hahafoana vola amin'izy ireo aza.
Mandany vola an'arivony tapitrisa Apple ny fanatsarana ny sarintany
Misy ny sarintanin'i Apple, fantatsika rehetra fa misy izy ireo, saingy tsy dia maro loatra ireo manao ny sarintany ...
Isan'andro - HomeKit
HomeKit, sehatra demotic an'ny Apple, dia 5 taona izao. Manararaotra miresaka momba ny fiasan'izy ireo izahay, ...
Ny fampiharana WWDC dia lasa ny «Apple Developer» App
Manova tanteraka ny fampiharana WWDC i Apple ary manampy anarana vaovao miaraka amin'ny fanatsarana hafa ao anaty fampiharana. Antsoina hoe "Apple Developer" izy izao
Ho hitantsika tsy ho ela ve ny Apple Pencil miaraka amin'ny efijery?
Ny patanty Apple dia mampiseho izay mety ho endrik'i Apple Pencil amin'ny alàlan'ny efijery sy sensor iray izay mety hisintona loko avy any ivelany.
Ny varotra iPhone dia mitombo any Sina miaraka amin'ity kinova farany ity
Ny angon-drakitra farany dia manondro fa ny iPhone 11 amin'ny endriny rehetra dia miakatra ny fitomboan'ny varotra any Shina raha oharina tamin'ny taon-dasa.
Apple Watch Series 1 sy 2 dia tapaka, ary tsy manamboatra azy ireo izy ireo
Mpampiasa Apple Watch maro no tsy sahy nivezivezy tamin'ny orinasa "hamoaka" vetivety ny Apple Watch ...
Isan'andro - Apple Watch sy Dethythmia Detection
Apple Watch dia nodinihina tamin'ny endri-pitsikilovany arrhythmia. Inona no vokany? Inona no dikan'izany rehetra izany?
Ny Apple Watch dia manampy amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona autiste
Ny Apple Watch dia navadika ho fitaovana manampy antsika hanatsara ny fahasalamana sy ny fahasalamana, zavatra ...
Ny lalàna alemanina vaovao dia mety hahatonga ny chip NFC amin'ny iPhones hisokatra amin'ny antoko fahatelo
Ny lalàna alemanina vaovao iray dia mety hanery an'i Apple hanokatra ny chip NFC amin'ny fitaovany hamela ny fandoavam-bola amin'ny sehatra fahatelo.
Ny serivisy famandrihana magazine Apple, Apple News +, dia tsy mahomby araka ny nantenain'izy ireo
Apple News + dia nitombo hatramin'ny nanombohany ny volana martsa 2019, ary mbola mitazona mpamandrika 200.000 XNUMX hatrany am-panombohana.
Apple dia andrasana hitarika ny varotra finday 5G amin'ny taona 2020
Apple dia antenaina hitarika varotra finday 5G amin'ny taona 2020, alohan'ny Samsung sy Huawei.
Apple Music dia manampy ny lisitra «averimberina» miaraka amin'ireo hiranao henoina indrindra
Apple dia mandefa ny "Replay", lisitra manokana miaraka amin'ireo hira izay efa nilainay indrindra nandritra ny taona iray.
Ireo podcast Spotify dia mitombo hatrany ary mahatratra an'i Apple any amin'ny firenena eropeana maromaro
Nandritra ity taona ity, ny fampiasam-bolan'ny Spotify amin'ny podcast dia manan-danja tokoa, fampiasam-bola izay ...
Tandremo: ny fampiharana Facebook dia mampihetsika ny fakantsary iPhone tsy mahazo alalana
Nanao fanambarana ny Facebook androany manaitra ny mpampiasa azy rehetra izay manana iPhone nohavaozina ho an'ny iOS 13….
Ny orinasan'ny CEO ex-HBO dia afaka nanao sonia fifanarahana manokana tamin'ny Apple TV +
Apple dia afaka nanao fifanarahana tamin'i Richard Plepler, CEO taloha an'ny HBO, mba hamokarana atiny am-boalohany ho an'ny serivisy Apple TV +.
Podcast 11 × 12: Habemus MacBook Pro vaovao
Miresaka momba ny MacBook Pro manaraka izahay, hoy i Gurman, fa hanomboka i Apple rahampitso, miresaka momba ny drafitr'i Apple amin'ny taona manaraka ihany koa izahay.
AirPods, vokatra faharoa malaza indrindra an'ny Apple aorian'ny iPhone
Ny AirPod amin'ny karazany rehetra dia izao no vokatra be mpividy indrindra an'i Apple ao ambadiky ny vokatra sahanin'ny orinasa, ny iPhone.
Isan'andro - Warranty, fanamboarana ary AppleCare +
Amin'ity fizarana androany ity dia niresaka momba ny fiantohana momba ny vokatra Apple, ny vidin'ny fanamboarana ary izay atolotry ny AppleCare +.
New iPad Pro ho an'ny taona 2020, zava-misy marobe sy virtoaly amin'ny 2022 ary solomaso ho avy eo
Blooomber dia manambara ny drafitr'i Apple momba ny Augmented Reality sy Virtual Reality mandritra ny 3 taona ho avy.
3D Touch sy Haptic Touch, inona avy ireo fahasamihafana? [VIDEO]
Fantatrao ve ny tsy fitovian'ny 3D Touch sy ny Haptic Touch? Ampianarinay anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao sy ny fomba fanamboarana an'io fampiasa vaovao io.
Isan'andro - Inona no atao hoe WiFi 6 (802.11AX) sy ny fanatsarana ny fifandraisana ao an-trano
Inona no atao hoe WiFi 6? Ahoana no hanatsaranao ny fifandraisana Internet amin'ny tranonay? Inona no mila atao mba hanararaotako azy? Nanazava ny zava-drehetra tamin'ity fizarana ity.
Ny vondrona eropeana izao dia mametraka ny masony amin'i Apple Pay
Ankehitriny dia manadihady ny Apple Pay ny Vondrona Eropeana noho ny fampiharana fomba fanao ampihimamba azo atao ary ny fepetra hamerana ny fitomboany dia tsy voahilika.
Tonga ny hevitra voalohany amin'ny iOS 14: Split View, kaontin'ny mpampiasa ary maro hafa
Ny hevitra voalohany amin'ny iOS 14 dia mampiseho amintsika asa mahaliana sasany toy ny fahatongavan'ny Split View amin'ny iPhone na ny fanavaozana ny sary masina ankehitriny.
Apple dia te-hanome tombony ho an'ny mpiasa ray aman-dreny
Apple dia te hanamafy ny tombontsoa azon'ny mpiasan'izy ireo rehefa tonga ray aman-dreny izy amin'ny alàlan'ny fanampiana 4 herinandro karama bebe kokoa.
Afaka mampiasa Google Assistant amin'ny mpandahateny Sonos anao ianao izao
Sonos dia efa mamela anao hametraka Google Assistant amin'ny mpandahateny Sonos One, Beam ary Move anao, hampiasa ny Google Assistant amin'ny Espaniôla.
Isan'andro - olan'ny fandrakofana, RAM, Photoshop ary Apple TV +
Tao amin'ny podcast isan'andro androany dia niresaka momba ny fitantanana ny RAM 13.2 RAM izahay, ny olana momba ny fandrakofana amin'ny Movistar, ary ireo lohahevitra mafana hafa.
Apple mandefa ny Beta voalohany an'ny iOS 13.3, iPadOS 13.3 ary watchOS 6.1.1
Apple dia namoaka ny Beta voalohany an'ny iOS sy iPadOS 13.3, watchOS 6.1.1 ary tvOS 13.3, ho an'ny mpamorona ihany no misy.
Apple manangona vola mitentina 2.500 miliara hanampiana amin'ny tsy fahampian'ny trano
Ny orinasa Cupertino dia nanao famatsiam-bola an-tapitrisany dolara hanampiana an'i California amin'ny olan'ny trano
Tsy ho ela dia ho hitanao mivantana ireo tranofiara Netflix ao amin'ny WhatsApp
Ankehitriny ny WhatsApp dia hamela anao hijerena mivantana ireo tranofiara Netflix mivantana avy amin'ilay fampiharana raha miresaka.
Manolotra Office for iOS sy Android amin'ny rindrambaiko tokana i Microsoft
Manolotra Office for iOS sy Android amin'ny rindrambaiko tokana i Microsoft. Ampidiro ny Word, Excel ary PowerPoint ary ampio fiasa vaovao amin'ny alàlan'ny fakantsary.
Apple dia manandrana mamaha ireo mpampiasa izay tsy afaka manavotra ny taona tsy andoavan'ny Apple TV +
Apple dia manome kaody azo avotana amin'ny taona maimaim-poana amin'ny Apple TV + ho an'ireo mpampiasa nividy fitaovana aorian'ny 10 septambra.
Fividianana tsy misy zana-bola 24 volana ho an'ny mpampiasa Apple Card
Ireo mpampiasa Apple Card dia afaka mamatsy vola ny fividianana ao amin'ny Apple Store hatramin'ny 24 volana tsy misy zanabola.
Isan'andro - Farano ny herinandro izay mety nisy ary tsy nisy
Herinandro dia nifarana izay nandrasantsika zavatra be dia be fa tamin'ny farany dia nijanona tamin'ny fanambarana ny AirPods Pro sy ny fanombohana ny Apple TV +.
Apple dia mandefa famandrihana isan-taona amin'ny Apple TV + miaraka amin'ny fihenam-bidy 10 euro
Apple TV + dia tsy misy amin'ny fandoavam-bola isam-bolana ihany, fa afaka mividy herintaona ihany koa isika miaraka amin'ny fihenam-bidy 10 euro.
Podcast 11x10: Vaovao farany, Bugs ary AirPods Pro
Mamaly mivantana ireo fanontaniana apetrakao aminay momba ny AirPods Pro izahay, izay vao tao anatin'ny ...
Apple Music Student Subscription dia hisy AppleTV + maimaim-poana
Apple Music Student Subscription izao dia ho tonga amin'ny famandrihana AppleTV + tsy andoavam-bola fanampiny.
AirTag, ity no ho anaran'ny fitaovana fitadiavan'i Apple
Izay no mety ho anaran'ny fitaovana apetrak'i Apple dia naseho: AirTag, izay mety manana bateria soloina ihany koa.
WhatsApp dia mamaha ilay bibikely izay mampiseho balaonina fampandrenesana amin'ny resaka tsy fantatra
WhatsApp dia nohavaozina tamin'ny famahana ny iray amin'ireo lesoka niseho ho fampandrenesana nefa tsy namaky ny hafatra nifampiresahana nangina.
Mahatratra 113 tapitrisa ny isan'ny mpanjifa Spotify
Ny isan'ny mpamandrika nambaran'ny Spotify, izay lazain'izy ireo fa manana mpanjifa 113 tapitrisa, mamela ny orinasa hampiakatra ny vidiny amin'ny 16%
Ny toko voalohany amin'ny "See" ao amin'ny Apple TV + dia misy atiny mahery setra sy mamoa fady
Ilay andiany starring Jason Momoa, 'See', dia andiany noforonin'ny Apple TV + izay ahitantsika ny sary mamoafady sy mahery setra.
Ireo no AirPods Pro ary mitentina 279 euro izy ireo
Toy izany koa ny AirPods Pro vaovao miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika ary izay vidiny tsy latsaky ny 279 euro, tsy isalasalana fa hanome be horesahina izy ireo.
Ny iPhones manaraka dia mety hanana fampisehoana 120Hz
Ny tsaho vaovao dia manome toky fa afaka manana iPhone vaovao isika amin'ny taona 2020 miaraka amin'ny efijery ProMotion miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120Hz, toy ny iPad Pro
Isan'andro - eo an-dàlana ny AirPods Pro
Afaka namoaka ny AirPods Pro vaovao i Apple tamin'ity herinandro ity tamin'ny hetsika kely niaraka tamin'ny mpanao gazety voafantina sasany.
iOS 13 taorian'ny iray volana nampiasana azy, mendrika ve izany?
Nampiasa ny iOS 13 nandritra ny iray volana mahery izahay, efa nahazo antenaina ve ity kinova farany an'ny rafitra fiasa ity? Fihetseham-po mifangaro.
Ny AirPods Pro dia mety ho tonga amin'ny loko isan-karazany
Ny AirPods Pro vaovao dia mety tonga hatramin'ny loko 8 isan-karazany, ao anatin'izany ny loko efatra an'ny iPhone 11 Pro ankehitriny
Isan'andro - Chip U1 an'ny iPhone vaovao
Ny puce U1 dia mety ho fonony lehibe amin'ny iPhone vaovao 11. Vao notantaraina tamin'ny fampisehoana ny ...
Tonga any Espana ny zava-baovao ao amin'ny Philips Hue
Ireo no vaovao rehetra momba ireo laharam-pahamehan'ny vokatra Philips Hue izay ananantsika any Espana tamin'ny fampisehoana ofisialy azy ireo.
Podcast 11 × 09: Ary ny Keynote ho an'ny rahoviana
Samy nanana fampisehoana Apple vaovao daholo isika tamin'ny faran'ity volana ity, saingy ankehitriny dia efa ...
Ny tobin'ny toetrandro Netatmo dia mifanaraka amin'ny HomeKit
Vao nahazo fanavaozana ny firmware ny Netatmo Weather Station mba hifanaraka amin'ny sehatra Apple HomeKit ihany.
Tsia, ny Google Photos dia tsy hamela anay handefa sary amin'ny HEIC raha tsy misy famoretana
Google Photos dia nahatsikaritra ary tsy hanohy ny famelantsika handefa sary amin'ny endrika HEIC raha tsy voageja ao anaty rahona izy ireo.
iA Mpanoratra dia mahazo maody maizina ao amin'ny iOS 13
Ankehitriny iA Writer dia nohavaozina tamin'ny endrika vaovao maro, koa manampy maody maizimaizina ho an'ny iOS sy iPadOS ankoatry ny toe-javatra maro hafa.
Araka ny DigiTimes dia hanomboka amin'ny faran'ny volana ny MacBook Pro 16-inch
Araka ny DigiTimes dia hanomboka amin'ny faran'ny volana oktobra ny MacBook Pro 16-inch
Isan'andro - Kids sy iPad / iPhone, torohevitra momba ny fampiasana tompon'andraikitra
Androany dia miresaka amin'ny podcast momba ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny isika, amin'ny fomba fampiasana ny Fotoana fampiasana azontsika atao ny mifehy izay ataon'ny zanatsika amin'ny iPad sy iPhone
Fantatrao ve fa manafina mpampifandray varatra amin'ny Apple TV i Apple?
Misy mpampitohy Lightning hita tao amin'ny Apple TV 4K izay mety misy ifandraisany amin'ny SAT sy ny fikojakojana rindrambaiko.
YouTube dia manampy ny fanohanana HDR amin'ny fampiharana iPhone 11
Nohavaozina ny YouTube ary nampiditra ny fanohanana ny haitao High Dynamic Range (HDR) tao amin'ny lahatsariny YouTube ho an'ny iPhone 11.
Ireto ny lalao vaovao nampiana tao amin'ny Apple Arcade
Ankehitriny Apple Arcade dia misy anaram-boninahitra vaovao maromaro hahafaly ny mpanjifany, misy karazany sy sokajy samihafa.
Ny chip A13 dia voamarina fa 20% haingana kokoa noho ny chip A12
Ny haino aman-jery natokana ho an'ny fitaovana dia namakafaka ny chip A13 amin'ny lalina ary manome antoka fa 20% haingana kokoa noho ny chip A12 an'ny Apple.
Isan'andro - Notch Sambatra
Rehefa tokony ho avo ny fiarovana ny fitaovantsika dia toa misy fepetra hafa manan-danja kokoa ankehitriny, toa ny hatsaran-tarehin'izy ireo.
Google Maps dia mamela anao hampitandrina ny amin'ny lozam-pifamoivoizana, ny radara ary ny toe-javatra hafa
Amin'ity herinandro ity ny asan'ny Google Maps vaovao dia ho tonga amin'ny iOS izay ahafahantsika mampitandrina ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana na radara eny an-dalana.
Apple no orinasa manandanja indrindra manerantany amin'ny taona fahafito misesy
Nandritra ny taona fahafito nifanesy dia Apple indray no marika sarobidy indrindra eran'izao tontolo izao, ambonin'ny orinasa rehetra, anisan'izany ireo tsy teknolojia.
Ny AirPods Pro dia afaka natomboka tamin'ity volana Oktobra ity ihany
Fanontana iray nataon'ny haino aman-jery sinoa iray izay manome antoka fa ho tonga amin'ity volana oktobra ity ny AirPods Pro vaovao miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba
Apple Pay eo ambany mason'ny mpanadihady antitrust an'ny Vondrona Eropeana
Ny Apple Pay dia eo am-pelatanan'ny Vaomiera Antitrust Eropeana amin'izao fotoana izao. Ny olana lehibe dia ny fiarovana ny puce NFC
Ny Google Pixel 4 dia mamafy fisalasalana momba ireo "fampiasa" vaovao
Google dia nanangana ny findainy vaovao andro vitsy lasa izay, na inona na inona volavola, azo iadian-kevitra nefa miorina amin'ny hevitra ...
Podcast 11 × 08: Fanavaozana, Google ary Sina
Herinandro be dia be izao tamin'ny fepetra noraisin'ny Apple noho ny tsindry ...
Ahoana no fandraisan'ny Twitter hafatra avy amin'ireo mpitondra politika manerantany?
Twitter dia namoaka tao amin'ny bilaoginy ny fitsipika sy ny toe-javatra misy ireo bitsika nataon'ny mpitondra politika manerantany.
Beats Solo Pro, headphones manafoana feo vaovao an'ny Apple
Apple dia mandefa ny Beats Solo Pro miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika sy ny fahaverezan'ny singa manan-danja iray, tsy manana jack 3,5mm izy ireo.
Isan'andro - Ny 5G, ankehitriny sa ny ho avy?
Ny 5G dia ny fifandraisana amin'ny ho avy, fa tena ny ankehitriny ve? Inona no tombony omeny antsika? Efa misy ve izany araka ny lazain'ny maro amintsika?
Tena vidiny ny fanaovana iPhone 11 Pro Max
Manomboka amin'ny fanehoan-kevitra isan-taona momba ny maodely ankehitriny natolotry ny orinasa Cupertino izahay, ary ...
Isan'andro - Project Catalyst, ny làlana mankany amin'ny fampiharana manerantany
Project Catalyst dia mandefa amin'ny macOS Catalina ary mitarika ny làlana mankany amin'ny fampiharana manerantany manan-kery ho an'ny iPhone, iPad, ary Mac.
Ity hevitra ity dia mampiseho ny iPhone 12 Pro sy ireo fakantsary efatra
Ny iPhone 12 Pro dia havoaka amin'ny volana septambra 2020 fa ankehitriny dia efa misy ny hevitra maneho ny mety fanesorana ny toerana misy azy sy ny fakantsary efatra.
Ovao ho iPhone 11 Pro saika maimaimpoana ary amin'ny iray segondra ny iPhone X-nao
Te hanova ny iPhone X anao ho iPhone 11 ve ianao nefa tsy mandany vola ary tsy latsaky ny dimy minitra? Mora be izany, asehonay aminao amin'ny horonan-tsary.
Ahoana ny fomba hamafana ny tantara Siri amin'ny iPhone
Ny tsiambaratelo dia teboka manan-danja tokoa ho an'ny orinasa Cupertino, farafaharatsiny izany no ...
Nomad Base Station Pro, mety ho inona ny AirPower ary tsy nisy velively
Nomad dia nanambara ny toby famahanana izay mamela anao hampiasa ny tontolony manontolo mba hamerenany fitaovana indray, araka ny nampanantenain'i Apple tamin'ny AirPower-ny.
Ny hoavin'ny Apple Music: mifantoka bebe kokoa amin'ny mpanakanto ary mozika mivantana bebe kokoa
Ny mpitantana manerantany ny Apple Music dia nanisy sonia ny ho avin'ny fitaovana manasongadina ny mozika mivantana sy ny lanjan'ireo mpanakanto.
Apple mandefa ny iOS 13.2 Beta 2 miaraka amin'ny fanovana mahaliana
iOS 13.2 Beta 2 dia mitondra vaovao mahaliana antsika toy ny safidy vaovao hamafana ny fampiharana, hanovana horonantsary ary emoji vaovao
Ny iPhone 11 Pro dia manana feo ratsy kokoa noho ny iPhone XS araka ny DxOMark
Ny famakafakana voalohany dia tonga tamin'ny famaranana fa ny iPhone 11 Pro Max dia manome kalitao feo ratsy kokoa noho ny iPhone XS Max amin'ny ankapobeny.
Araka ny voalazan'i Kuo dia hisy iPad Pro sy iPhone SE 2 vaovao amin'ny lohataona ho avy
Araka ny voalazan'i Kuo dia hisy iPad Pro vaovao sy iPhone SE 2 amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona 2020
NYPD efa ela no afaka namoha iPhone
Betsaka ny zavatra nolazaina tato anatin'ity taona ity momba ny adihevitra lehibe manodidina ny filaminan'ny iOS sy ny fomba ...
Apple dia mikasa ny hanome amboara miaraka amin'ny Apple Music sy Apple TV +
Misy vintana lehibe mety hieritreretan'i Apple ny famoronana fonosana serivisy famandrihana amin'ny vidiny mihena.
Podcast 11 × 07: Famotsorana macOS Catalina
Lazainay aminao ny vaovao momba ny macOS Catalina sy ny fiheverana voalohany anay 24 ora taorian'ny nanombohany tamin'ny fomba ofisialy
Iza amin'ireo iPads no mifanaraka amin'ny endri-javatra Sidecar an'ny macOS Catalina?
Apple dia namoaka macOS Catalina, ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny Mac, izay misy Sidecar. Hamarino raha manohana an'io endri-javatra vaovao io ny iPad-nao.
Nitsidika ny Apple Store 5th Avenue vaovao tany New York izahay
Ny ekipa Actualidad iPhone dia niditra tao amin'ny Apple Store 5th Avenue vaovao any New York, Apple Store misokatra 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro.
Isan'andro - Inona no Vaovao ao amin'ny macOS Catalina
Lazainay aminao ny vaovao lehibe an'ny macOS Catalina, ny kinova farany an'ny rafitra fiasa ho an'ny Mac izay natombok'i Apple.
Tonga amin'ny fomba ofisialy amin'ny Apple TV ny fampiharana Twitch
Ankehitriny Twitch dia natomboka tamim-pomba ofisialy tao amin'ny Apple TV, miaraka amin'ny fanemorana tsy azo avela intsony fa tonga hihaona amin'ny farany ny filan'ny mpanjifa amin'ny sehatra.
Ny fanarahana torimaso amin'ny Apple Watch dia akaiky hanombohana
Mpampiasa Apple maro no mitaky fampiharana fampiharana torimaso amin'ny Apple Watch, ary ny pikantsary dia toa manamafy fa efa akaiky ny hanombohana azy.
Consorts Reports anarana iPhone 11 Pro Smartphone tsara indrindra
Consorts Reports anarana iPhone 11 Pro Smartphone tsara indrindra amin'ny taona 2019
Isan'andro - topi-maso mialoha ny vanim-potoanan'ny ririnina
Araka ny vaovao sy tsaho tato anatin'ny herinandro farany dia ampahafantarinay anao ny vaovao mety hatolotr'i Apple aminay amin'ny faran'ny volana oktobra.
Dickinson, andiany misy hatsikana mainty voamarika ao amin'ny Apple TV +
Dickinson no andiany vaovao Apple TV + andiany voalohany amin'ny 1 Novambra. Ity andiany ity dia sanganasa manan-tantara momba ny poeta mpikomy iray izay mahatsikaiky mainty.
Jeff Williams: "fanamby tsy mampino ny vatan'olombelona"
Ny talen'ny tompon'andraikitra miasa ao Apple, Jeff Williams, dia manome toky fa ny tsy fahitana ny singa misy ra miaraka amin'ny Apple Watch dia fanamby sarotra.
Rosiana iray no manameloka an'i Apple noho izy nanao azy ho pelaka
Toa mbola lavitra ny fanjavonan'ny homophobia na dia efa ho vita aza isika ...
Isan'andro - Apple TV, Apple TV app, ary Apple TV +
Niresaka ny fahasamihafana misy eo amin'ny Apple TV, ny Apple TV app, ary ny serivisy Apple TV + izahay, hevitra telo mifandraika nefa samy hafa.
Fanesorana rindrambaiko fampiharana iray any Hong Kong
Ny firongatry ny herisetra tany Hong Kong dia nahatonga ny fampiharana sasany natomboka hampahafantatra ny fotoana misy azy ireo ary nisintona ny iray tamin'izy ireo i Apple tamin'ny talata
Na eo aza ny AppleTV + sy Disney +, Netflix dia hijanona ho Mpanjaka ihany
Ny fanadihadiana natao vao haingana dia manondro fa ny 75% n'ny mpampiasa Netflix dia tsy liana amin'ny AppleTV + na Disney + ao anatin'ny fotoana fohy,
Mario Kart Tour no malaza indrindra amin'ny finday an'i Nintendo
Mario Kart dia nanjary fanombohana nahomby indrindra an'i Nintendo ho an'ny telefaona finday miaraka amin'ny fisintomana zato tapitrisa.
Isan'andro - Inona no atao hoe Deep Fusion ary ahoana ny fomba fiasan'izy io
Apple dia namoaka ny iOS 13.2 Beta 1 izay namoaka ny Deep Fusion. Azavainay ny fomba fiasan'ity fakan-tsary vaovao an'ny iPhone 11 ity
Izany no fiasan'ny Deep Fusion amin'ny iPhone 11 sy 11 Pro
Ahoana ny fiasan'ny Deep Fusion? Azavainay amin'ny antsipiriany sy tsy misy teknika ny fomba fiasan'ity fakan-tsary vaovao an'ny iPhone farany ity.
Apple dia nandefa ny iOS 13.2 Beta miaraka amin'ny Deep Fusion ary vaovao maro hafa
Ny iOS 13.2 Beta vaovao dia mitondra ny sasany amin'ireo lahasa izay nambaran'i Apple tamin'ny Keynote farany fa mbola tsy hitantsika hatramin'izao.
Ny mpampiasa sasany dia miaina olan'ny bateria amin'ny iOS 13.1.2
Toa mpampiasa maro no manana olana amin'ny bateria sy ny fandrakofana hatramin'ny namoahana ny iOS 13.1.2 ary manao ny fitarainany.
Vetivety dia ho afaka hisafidy rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra Siri hampiasainao amin'ny toerana misy anao
Tsy ho ela isika dia afaka misafidy izay fampiharana fandefasan-kafatra hampiasain'i Siri amin'ny alàlan'ny default, ary hisafidy irery aza izy hoe iza no tena mety indrindra.
Podcast 11 × 06: Fanavaozana ny cascoporro
Ao amin'ny podcast amin'ity herinandro ity isika dia miresaka momba ny maodely Apple Arcade sy ny vaovao hafa mifandraika amin'ny Apple sy ny haitao amin'ny ankapobeny
Amin'ny 30 Oktobra dia ho fantatsika ny valiny ara-bola amin'ity telovolana ity ao Apple
Apple dia hanolotra ny kaonferansa valim-bola amin'ny alatsinainy 30 oktobra ho avy izao. Antenaina hitondra ny lafy tsaran'izy ireo amin'ny vokatra vaovao eny an-tsena izy ireo
Inona no ary inona no iampangana ny iPhone optimised?
Ny iray amin'ireo zava-baovao dia ny "enta-mavesatra nohavaozina", lazainay aminao hoe inona izany, inona no ahitana azy ary ahoana ny fomba handrindrana ity fampiasa vaovao tafiditra ao amin'ny iOS 13 ity.
Apple dia namoaka ny iOS 13.1.2 sy ny watchOS 6.0.1
Apple dia namoaka ny iOS 13.1.2 manamboatra olana amin'ny HomePod, iCloud, Camera, calibration amin'ny efijery, Bluetooth ary ny hitsin-dàlana.
Ny patanty iray dia mitazona ny tsiambaratelon'ny vera aoriana ao amin'ny iPhone 11 Pro
Betsaka ny tsy fantatra momba ny vera matte vita amin'ny iPhone 11 Pro izay voavaha amin'ny patanty amerikana ankehitriny.
Apple TV + namoaka tranofiara vaovao nitarina ho an'ny 'ho an'ny olombelona rehetra »
Apple dia namoaka ny tranofiara vaovao nitarina ho an'ny andiany vaovao "For All Mankind" vaovao hita amin'ny Apple TV + manomboka amin'ny 1 Novambra.
Isan'andro - Andao hiresaka bateria
Ao amin'ny Dailky androany dia miresaka momba ny famahanana haingana, ny famahanana tsy misy tariby, ny fanamafisana ny iOS 13 isika ... ny rehetra momba ny baterian'ny iPhone
Apple dia te-hamoaka ny sarimihetsika any Hollywood alohan'ny Apple TV +
Ny bandy Cupertino dia mikasa ny hamoaka ny horonantsarin'izy ireo tany amin'ny sinema fa tsy amin'ny serivisy video streaming.
Apple dia mamaritra ny fe-potoana aprily 2020 amin'ny fandefasana fampiharana amin'ny iOS 13 sy iPadOS SDK
Apple dia nametraka ny aprily 2020 ho fetra hanavaozana ny fampiharana sy handefasana fampiharana vaovao noforonina miaraka amin'ny iOS sy iPadOS 13 SDK hanatsarana ny fampiasan'izy ireo.
Apple dia namoaka ny iOS 13.1.1 fixer bug
Apple dia namoaka ny iOS 13.1.1 hanamboatra lozam-pifamoivoizana isan-karazany amin'ny Siri, Kitendry antoko fahatelo, famerenam-bidy ary fiainana bateria
Spotify dia efa manohana an'i Siri ao amin'ny Beta ho an'ny iOS
Spotify dia efa mampifanaraka ny fampiharana azy amin'ny iOS 13 mba hifanaraka amin'ny Siri, ary amin'izany dia afaka mifehy ny playback amin'ny alàlan'ny mpanampy an'i Apple.
iOS 13.1 dia manakana ny famandrihana haingana tsy misy tariby
iOS 13.1 koa dia misy lesoka kely, toa manakana ny famahanana haingana ny charger tsy misy tariby izy.
Isan'andro - iPhone 11 Pro Max, ny lalao vaovao avy amin'ny Nintendo sy Amazon dia manafika antsika
Podcast isan'andro vaovao izay hiresahako ny zavatra niainako ary aorian'ny herinandro miaraka amin'ny iPhone 11 Pro Max sy ny vaovao avy amin'ny Nintendo sy Amazon.
Podcast 11 × 05: Iza no manavao indrindra?
Tamin'ity herinandro ity izahay dia niresaka momba ny fanavaozana ny smartphone ao amin'ny podcast anay, ary koa ny kinova vaovao an'ny iOS sy iPadOS izay natombok'i Apple.
IOS 13.1 sy iPadOS izao dia azo sintonina
Ny fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela amin'ny iPadOS dia azo apetraka ho an'ny maodely iPad tohana, ary koa ny iOS 13.1 ho an'ny iPhones.
Apple namoaka Trailers ho an'ny Series vaovao roa: "Ghostwriter" sy "Helpsters" ho an'ny Apple TV +
Apple dia namoaka tranofiara roa ho an'ny andiany roa vaovao izay ho hita amin'ny Apple TV +. Amin'ny lafiny iray, Helpsters ary amin'ny lafiny iray The Ghost Writer.
Apple dia namoaka ny watchOS 6.1 Beta 1 ho an'ny mpamorona
Apple dia namoaka WatchOS 6.1 Beta 1 ho an'ny mpamorona 24 ora fotsiny alohan'ny famoahana vaovao iOS 13.1 vaovao
Ny iPhone 11 Pro Max dia manana ny efijery tsara indrindra eny an-tsena
Herintaona indray ny efijery an'ny iPhone vaovao dia mahatratra ny laharana voalohany eo amin'ny tsenan'ny smartphone, manongana ny Galaxy Note 10+
Apple dia mampihetsika ny famatsiam-bola tsy misy zana-bola amin'ny vokatra rehetra ao aminy
Mazava i Apple fa amin'ity taona ity dia mila mivarotra ny iPhone faran'izay betsaka azo atao izy ireo ary aorian'ny fandefasana ireo maodely vaovao dia mampihetsika ny famatsiam-bola tsy misy zana-bola
iOS 13 manafina singa ao amin'ny Find My izay hanamafy ny fahatongavan'ny Apple Tag
Ny kaody loharanon'ny iOS 13 dia mampiseho vaovao momba ilay Apple Tag heverina, ilay fitaovana azontsika ifikirana amin'ireo singa hisorohana ny fahaverezan'ny azy ireo.
Ahoana ny fomba hanamboarana ny mombamomba ny mpampiasa Messages ao amin'ny iOS 13
Mijanona aminay ary fantaro ny fomba ahafahanao manamboatra ny mombamomba ny mpampiasa Messages ao amin'ny iOS 13 amin'ny fampidirana "nick" sy sary iray.
Apple mandroso ny famoahana ny iOS 13.1 sy iPadOS hatramin'ny 24 septambra
Vao nanambara i Apple fa ny famoahana ny iOS 13.1, ny fanitsiana voalohany an'ny iOS 13, ary koa ny iPadOS dia mandroso ny fampisehoana azy ireo hatramin'ny 24 septambra.
Steve Dowling, lohan'ny fifandraisana ao amin'ny Apple, dia nandao ny orinasa Cupertino
Ny filoha lefitry ny serasera Apple, Steve Dowling, dia handao ny toerany amin'ny orinasa aorian'ny 16 taona niasana mafy.
Apple dia misoratra anarana marika "Slofie", tena Solon'ny selfie?
Ankehitriny Apple dia nanome patanty ny marika "Slofie" any Etazonia, amerikana dia matotra ny fanentanana ho an'ny selfie miadana.
Podcast 11 × 04: Ny iPhone 11 no kintana indray
Izahay dia mamakafaka ny fandalinana voalohany ny iPhone 11 sy 11 Pro, ary koa ny Apple Watch Series 5 vaovao, ho fanampin'ny vaovao hafa amin'ny herinandro
RAM 4GB nohamarinina tamin'ny iPhones rehetra sy ny processeur an'ny Watch Series 5
Araka ny Xcode, ny iPhone 11 sy iPhone 11 pro dia samy manana "4GB" RAM fotsiny, ary hita ihany koa fa ny chipset Watch Series 5.e
Apple mandefa betas vaovao an'ny iOS sy iPadOS 13.1
24 ora monja alohan'ny fandefasana ampahibemaso ny iOS 13, Apple dia namoaka ny Beta fahefatra an'ny iOS 13.1 sy iPadOS 13.1, izay ho tonga amin'ny 30 septambra.
Philips dia mandefa Play Box izay mandrindra ny jiro Hue amin'ny fahitalavitrao
Ny elanelan'ny Philips Hue dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hitantanana ny jironao amin'ny HomeKit, Philips koa dia manana ...
Apple dia mampiasa vola be any Corning, tompon'ny "Gorilla Glass", nahoana?
Tsy nahagaga raha nandany vola 400 tapitrisa dolara tany Corning i Apple, saingy ... nahoana?
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny iOS 13 alohan'ny hanavaozana
Akaiky kely ny iOS 13, isika izay manana fitaovana Apple marobe dia mahafantatra ilay iray izay ...
Ny fanoherana sy ny fakantsary an'ny iPhone 11 Pro dia mpiaro ny fanambarana Apple vaovao
Apple dia namoaka dokam-barotra vaovao roa hampiroborobo ny fakantsary sy ny fanoherana lehibe ny iPhone Pro vaovao.
Ity no katalaogy Apple Arcade iray manontolo misy amin'ny volana septambra
Apple Arcade dia misy amin'ny mpampiasa iOS 13 rehetra izao ary ity no lisitry ny lalao video 55 voalohany.
Na eo aza ny zava-drehetra, ny iPhone 11 Pro dia matevina kokoa noho ny iPhone XS
Na eo aza ny endriny nohavaozina sy ny loko vaovao, ny iPhone 11 Pro dia matevina kokoa noho ny iPhone XS, maninona no matavy ny iPhone amin'ity taona ity?
Apple Arcade dia misy miaraka amin'ny fitsarana iray volana maimaim-poana
Apple Arcade no mitarika ary efa misy tanteraka amin'ny iPhone izao, asehonay anao ny "Netflix an'ny lalao video" vaovao natombok'i Apple.
Ny vaovao rehetra momba ny Fahasalamana sy ny Asa ao amin'ny iOS 13
Tianay haseho anao ny zavatra rehetra nomanin'ny iOS 13 ho anay amin'ny rindranasa Fahasalamana sy Hetsika hivoahana amin'izany ny fampisehoana rehetra.
Isan'andro - Manavao ny kalandrie sy ny toro-hevitra amin'ny fanavaozana
Lazainay aminao ny kalandrie fanavaozam-baovao fa hanomboka amin'ny 19 septambra ny Apple fa tsy hifarana raha tsy amin'ny fararano
Fehiny farany amin'ny fampisehoana ny Apple sy ny mistery tsy voavaha toa ny RAM an'ny iPhones vaovao ary ny famerenana amin'ny laoniny.
Ireo iPhones vaovao dia mety hanana ny fitaovana ilaina rehetra amin'ny famerenana amin'ny laoniny fa Apple kosa dia afaka nanala azy tamin'ny alàlan'ny rindrambaiko
Nanokatra Apple Store vaovao i Mexico amin'ny 27 septambra
Amin'ny 27 septambra dia hanokatra ny Apple Store faharoa any Mexico i Apple, indrindra ao amin'ny ivontoerana Shopping Center
Ny iPad dia mbola Mpanjaka amin'ny tsena mitotongana
Ny fanadihadiana farany ny tsena dia manohy maminavina ny ho avy tsy azo antoka ho an'ny takelaka, na eo aza ny iPad dia mitombo hatrany ny varotra.
Apple dia tsy hanaiky fampiharana izay tsy novolavolaina niaraka tamin'ny Xcode 11 hatramin'ny aprily 2020
Apple dia handà ny fampiharana rehetra izay tsy novolavolaina niaraka tamin'ny Xcode 11 ary mifanaraka amin'ny efijery vokatra rehetra hatramin'ny aprily 2020.
Ny iPhone XS nanjavona, ireo ny vidiny vaovao amin'ny laharan'ny iPhone
Azavainay ny fomba misy ny vidin'ny iPhones isan-karazany ao amin'ny katalaogin'i Apple vaovao taorian'ny fampisehoana ny iPhone 11 sy ny iPhone 11 Pro.
Ny orinasa Cupertino dia manaitra anay amin'ny fihenan-danja amin'ny fehikibo Loop Leather sy Milanese, izay misy vidiny ambany ankehitriny.
iPhone 11, nahoana no azo antoka ny iPhone amidy indrindra
Tamin'ny taon-dasa dia niresaka ela be taminareo rehetra momba ny antony hitondran'izy ireo ny iPhone ...
Ity no Apple Arcade, baran'ny lalao video maimaim-poana an'ny Apple
Apple Arcade, ny Netflix an'ny lalao video izay hatolotr'i Apple ho an'ny mpampiasa azy rehetra, asehonay anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ity serivisy vaovao ity.
Ny tranga mangarahara dia tonga amin'ny iPhone 11 sy iPhone 11 Pro
Ankehitriny ny tranga mangarahara avy amin'ny Apple dia mifanaraka amin'ny iPhone 11 sy ny karazany roa amin'ny iPhone 11 Pro ho an'ny "45" fotsiny.
Taorian'ny fampidirana ny iPhone 11 vaovao, Apple Watch Series 5 ary ny iPad vaovao, dia nandinika lalina ny Keynote an'i Apple izahay.
iPhone 11 Pro sy iPhone 11 Pro Max, ity no faritra avo indrindra amin'ny iPhone
Tongasoa eto amintsika ny iPhone 11 Pro sy ny iPhone 11 Pro Max, asehonay anao ny fiasa rehetra sy ny tokony ho fantatrao momba ny sainan'i Apple vaovao.
Daty famoahana ofisialy ho an'ny iOS 13 sy iPadOS
Raha vantany vao vita ny fampisehoana ny iPhone 11 vaovao, dia mbola hiresaka momba ny iOS 13 ihany izahay, ary atolotray anao ny daty ofisialin'ny fanombohana ny iOS 13 sy iPadOS.
iPhone 11, izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny mpivarotra an'i Apple
Ity no iPhone 11 vaovao, lazainay aminao ny toetrany, ny vidiny ary izay rehetra tokony ho fantatrao momba ilay mpivarotra Apple vaovao.
iPhone 11 Pro sy iPhone 11 Pro Max, sainan'i Apple vaovao
Manohy amin'ny fampisehoana mivantana mivantana izahay ny fampisehoana ny Apple any San Francisco izay ahitantsika ...
Apple dia manolotra ny iPhone 11 vaovao miaraka amina endrika vaovao sy loko 6 misy
Loko enina, fakan-tsary roa ary fanatsarana ireo fika manokana ao anaty no tena zava-dehibe amin'ny Apple iPhone 11 vaovao.
Apple mandefa iPad vaovao 10,2-inch
Lazainay aminao ny vaovao rehetra momba ny iPad 10,2-inch vaovao natao mba hahazoana tombony betsaka amin'ny rafitra fiasa iPadOS vaovao.
Apple TV + dia ho tonga amin'ny 1 Novambra amin'ny vidiny $ 4,99 isam-bolana
Nanararaotra ny teny ifotoran'ity 11 septambra ity i Tim Cook hanolotra ny fahatongavan'ny Apple TV + amin'ny 1 Novambra miaraka amin'ny vidiny $ 4,99 isam-bolana.
Manomeza fampiasana tena izy amin'ny Apple Card, manapaka legioma miaraka aminy
Ny karatra Apple hafahafa dia manana tombony maro noho ny famolavolana sy ny fitaovana ao aminy, mahavita manapaka legioma mora foana izy, fa tsy ny zavatra rehetra no ho lany.
Nahazo fampifanarahana HomeKit feno ny takamoa Xiaomi
Ankehitriny ny jiro Xiaomi dia efa mifanaraka amin'ny asan'ny HomeKit sy Siri amin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy.
Kuo: na Apple Pencil, na famerenana amin'ny laoniny, na USB-C ao amin'ny iPhone 11 vaovao
Ming-Chi Kuo dia mamoaka faminaniana amin'ny minitra farany izay tsy manakana ny famerenana amin'ny laoniny ireo iPhone vaovao, ary koa ny Apple Pencil sy USB-C
Ny tracker an'i Apple dia mety hanimba ny varotra Tile
Tile dia nahita ny fivarotana ny vokatra misy azy avy eo aorian'ny fampidirana fitaovana fanarahana vaovao avy any Apple.
Araho mivantana ny fampisehoana ny iPhone 11
Lazainay aminao ny fomba hanarahana ny fampisehoana ny iPhone 11 vaovao ary handray anjara mivantana aminay, amin'ny alàlan'ny fandrakofanay.
Apple dia manana olana indray amin'ny ozininy any Shina
Apple dia nitolona tao Shina indray noho ny zavamaniry fivorian'ny Foxconn sy ny fomba itondrany ny mpiasa.
Ireo tranga ireo dia manamarina ny endrika iPhone 11 sy ny sary famantarana afovoany
Ny fivoahan'ny tranga fiarovana an'ny iPhone XI dia manamarina ny fanavaozana ny modely fakantsary sy ny toe-javatra misy ny sary.
Fa maninona i Apple no marika ankafizin'i Espana raha zara raha amidy?
Fa maninona i Apple no mariky ny mpampiasa Espaniôla na dia eo aza ny iray amin'ny iray amidy kely indrindra? Hodinihinay ity fifanoheran-kevitra mahaliana ity.
Joseph Gordon-Levitt hitarika tantara vaovao amin'ny Apple TV +
Andriamatoa Corman no ho andian-tantara vaovao Apple TV +, tantara an-tsehatra izay hotontosaina, nosoratan'i Joseph Gordon-Levitt
Izay rehetra hatolotr'i Apple amin'ny Keynote amin'ny 10
Ity no famintinana amin'ny zavatra rehetra hatolotr'i Apple miaraka amin'ny iPhone XI vaovao mandritra ny Keynote izay andrasantsika hatry ny ela.
Ny hetsika fampisehoana iPhone dia azo arahana mivantana amin'ny YouTube
Ny keynote fampisehoana iPhone manaraka ho an'ny 2019 dia ho hita ao amin'ny YouTube voalohany, ka hanitatra ireo safidy azo atao hijerena azy na aiza na aiza.
Eve dia manolotra sensor sy rano vaovao an'ny HomeKit vaovao
Eve dia nanolotra ny switch ho an'ny Smart HomeKit vaovao ho an'ny rafitra eropeana ary mpamantatra ny fivoahan'ny rano vaovao.
SensorKit dia mety ho kitapo fikarohana sy fampandrosoana an'i Apple manaraka
Apple dia afaka nandefa ny SensorKit, kit fampandrosoana vaovao izay hanokatra ny fidirana amin'ireo sensor marobe amin'ireo fitaovana hanaovana fikarohana.
Sonos dia manolotra ny Sonos Move vaovao, hankafizany ny feo lavitra ny trano
Sonos dia manolotra ny mpandahateny azo entina voalohany nefa miaraka amin'ny kalitaon'ny Sonos rehetra, ary koa ny Sonos One SL vaovao sy ny Port Sonos vaovao
Mpanamboatra tranga iray mampiseho iPhone amin'ny loko "hafa"
Indraindray ny mpanamboatra tranga dia manivana ny volavola sy ny loko avy amin'ny fitaovan'ny Apple, amin'ity tranga ity ny iray amin'izy ireo dia mampiseho loko hafa amin'ny ambiny
Mihaza iPhone X amin'ny sidina eo afovoan'ny roller coaster
Mpizahatany iray mihaza iPhone X amin'ny sidina eo afovoan'ny fiara fitaterana
Bloomberg Manatevin-daharana ny ID amin'ny efijery amin'ny taona 2020
Bloomberg dia manatevin-daharana ny onja ankehitriny izay miantoka fa amin'ny taona 2020 dia hanana iPhone misy fantsom-pandrefesana fantsom-pifandraisana ao ambanin'ny efijery isika
Gmail dia miaro ny fiarovana ny mpampiasa azy amin'ireo mpanara-maso tsy hita
Gmail dia namoaka fanavaozana vaovao miaraka amina endrika vaovao hanakanana ireo mpanara-maso tsy hita sy handray sary ho azy.
Apple dia tsy mety mamokatra andian-tsarimihetsika an'ny Bastards, nataon'i Richard Gere
Iray amin'ireo tetikasa izay tsy hahita ny fahazavana amin'ny Apple TV + intsony ny andiany mitondra an'i Richard Gere mitondra ny lohateny hoe Bastards.
Izany no fomba fiasan'ny Apple locator sy solomaso
Fantatray ny antsipiriany momba ny fiasan'ny solomaso nitarina sy ny tagan'ny locator vaovao hasehon'i Apple amin'ny 10
Navoaka ny anarana ofisialin'ny iPhone 11 sy iPad vaovao
Ny fivoahan'ny antontan-taratasy mifandraika amin'ny iOS 13.1 dia nanazava mazava tsara hoe iza ny anaran'ilay iPhone 11 vaovao ary toa tsy hisy ny tsy ampoizina.
Ahoana raha tsy nifindra ny fakantsary iPhone 11 Pro?
Miseho ireo sary vaovao momba ny iPhone 11 Pro izay mety hanoro hevitra fa ny fakan-tsary telo amin'ny farany dia tsy hivoaka avy ao aorinan'ny iPhone.
Herinandro aorian'ny famoahana ny iOS 12.4.1 izay manidy ny varavarana mankany amin'ny jailbreak ao amin'ny iOS 12.4, dia mbola azo atao sonia.
Podcast 11 × 02: Betas, fiarovana, tsaho ary herinandro ho an'ny iPhone 11
Herinandro aorian'ny fandefasana ny iPhone 11 dia mamakafaka ny vaovaon'i Apple sy ny tontolon'ny haitao ary koa ny tsaho farany
Tim Cook dia manome anjara maherin'ny 23.000 mitentina 5 tapitrisa $
Ny tale jeneralin'ny Apple Tim Cook dia manome anjara maherin'ny 23.000 mitentina 5 tapitrisa $ ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa tsy fantatra teo aloha.
Ny fanafihana ny iOS dia nampiasain'i China hanaraha-maso ny foko Uyghur
Ny fanafihana nahazo an'i iOS nandritra ny roa taona ary efa voavaha izao, dia nampiasain'i Shina hifehezana ny foko vitsy an'isa Uyghur
iOS dia iray amin'ireo fanafihana lehibe indrindra amin'ny tantarany, saingy efa voavaha io
iOS dia niaritra iray tamin'ireo fanafihana lehibe indrindra teo amin'ny tantarany, hitan'i Google ary voavaha tanteraka volana maro lasa izay.
Ao amin'ny Apple dia manokatra ny fanamboarana ny antoko fahatelo izy ireo
Fandaharana fanamboarana vaovao ho an'ireo orinasa lehibe na kely na antoko fahatelo, izany hoe, ivelan'ny Apple mihitsy. Voamarin'ny orinasa rehetra
Ofisialy io: amin'ny 10 septambra ho hitantsika ilay iPhone vaovao
Apple dia manamafy ny volana septambra ho daty hanehoany ilay iPhone vaovao 11. Fantatsika ve ny zava-drehetra sa hisy tsy ampoizina?
Xiaomi dia mandika ara-bakiteny ny rindrambaiko Apple Watch ao amin'ny Amazfit GTS
Ny finday avo lenta vaovao an'ny Xiaomi, ny Amazfit GTS, dia mandika mazava ireo sehatra lehibe hitantsika ao amin'ny Apple Watch Series 4
Fa maninona no mamoaka ny iOS 13.1 Beta 1 i Apple ary inona no vaovao ao aminy?
Andao hojerentsika ny antony namotsoran'ny Apple ny iOS 13.1 Beta 1 ary inona no vaovao ao amin'ny kinova vaovao ho an'ny mpamorona, indrindra amin'ny antsipirian'ny famolavolana.
Apple dia nanambara ny Apple Card vaovao ao amin'ny fantsona YouTube azy
Lahatsary vaovao navoakan'i Apple tao amin'ny fantsona YouTube azy no mampiseho ny vaovao lehibe sy ny asan'ny carte de crédit anao: ny Apple Card.
Nanisy ny faritra 'Vaovao' i Netflix mba tsy hanadinoanay na inona na inona
Netflix dia manampy fiasa vaovao ao amin'ny fampiharana antsoina hoe 'Ny farany', izay hiseho ireo lohateny izay hivoaka amin'ny andro ho avy ary azo ampiharina ny fampahatsiahivana.
Nahoana aho no mieritreritra fa ny iOS 13 no ho iOS Version tsara indrindra hatrizay
Ireo no antony mahatonga antsika hino fa ny iOS 13 no kinova tsara indrindra amin'ny iOS tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary mety amin'ny tantara koa.
Ny fivarotana Apple dia hanana fotoam-pivoriana Music Lab miaraka amin'i Taylor Swift
Ny mpihira Taylor Swift dia manamafy fa Apple dia hanao session Music Lab amin'ny hirany You Need To Calm Down
Mihena ny fiovan'ny iPhone ny mpampiasa, noho ny vidiny ve izany?
Ny fanadihadiana vao haingana dia nanambara fa ireo mpampiasa iOS dia manitatra ny iPhones hatrany hatrany hatrany, ary ny mpampiasa telefaona ankapobeny dia vitsy no mividy.
iCloud Web dia manavao sy mamerina mandahatra ny fampiharana Fampahatsiahivana
Nasehon'i Apple fa manohy miasa amin'ny fanatsarana ny iCloud izy, tamin'ity indray mitoraka ity dia nanampy ny fampahatsiahivana fampahatsiahivana amin'ny tranokala iCloud ho an'ny mpampiasa rehetra.
Spotify dia manitatra ny fe-potoana fitsapana azy ho 3 volana mba hifanandrinana amin'ny Apple Music
Amin'ny tolona ho serivisy streaming tsara indrindra, Spotify dia manitatra ny vanim-potoana fitsapana azy mandritra ny 3 volana manaraka ny dian'ny Apple Music.
iPhone Pro, Apple Watch 5, AirPods 3, iPad Pro vaovao ... Mark Gurman dia mandefa ny baomba farany navoakany
Mark Gurman dia mamoaka ny antsipiriany rehetra amin'ny iPhone vaovao, iPad Pro, Apple Watch, AirPods ary Mac izay kasain'i Apple hapetraka amin'ny taona 2019 sy 2020.
Tonga amin'ny Amazon Echo sy ny fitaovana Alexa any Espana sy Alemana ny Apple Music
Androany dia nohamafisina tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'ny Apple Music amin'ny fitaovana Amazon Echo sy izay rehetra mifanaraka amin'ny Alexa any Espana sy Alemana
Porsche dia hanolotra atiny Apple Music ho an'ny mpampiasa rehetra
Ankehitriny Porsche dia manao toy izany amin'ny Tycan ary ireo singa vaovao dia hanana fidirana tsy voafetra amin'ny Apple Music maimaim-poana, ankoatry ny CarPlay.
Apple dia nilaza fa namorona asa maherin'ny 300.000 tany Korea Atsimo
Nilaza i Apple fa namorona asa maherin'ny 300.000 tany Korea Atsimo izy, na mivantana na ankolaka hatramin'ny nahatongavany teto amin'ny firenena 20 taona lasa izay
Ireo no lesoka sy boka fahita indrindra ao amin'ny iOS 13 Beta 7
Ireo no lesoka sy boka mahazatra indrindra ao amin'ny iOS 13 Beta 7, fa misy ihany koa ny olana sasany voavaha toy ny fanjifana bateria.
Spotify dia manomana fifehezana ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny famandrihana ankohonanao
Tsy ho ela ireo mpitantana ny famandrihana fianakaviana Spotify dia afaka mampiasa rafitra fanaraha-maso ny ray aman-dreny.
Disney + dia manamafy fa hifanaraka amin'ny tvOS sy iOS izy io
Nanamafy i Disney fa ho tonga amin'ny 12 Novambra ny horonantsary momba ny fangatahana fangatahana, Disney +, ary afaka hahatratra ireo fitaovana iOS sy tvOS.
Trump "mieritreritra" ny laharan'ny tarif taorian'ny sakafo hariva niaraka tamin'i Tim Cook
Ny filoham-pirenena amerikana dia nilaza tamin'ny haino aman-jery fa ny Samsung dia hanana tombony ambonin'i Apple raha ampandehanana ny vidin'ny famokarana any Sina
Ny fanamby hetsika Apple Watch vaovao fankalazana ny faha-100 taonan'ny lohasaha lehibe
Apple dia manolotra ny fanamby ho an'ny hetsika vaovao izay hatao amin'ny 25 Aogositra, mankalaza ny faha-100 taonan'ny Grand Canyon of the Colorado.
Apple dia manomana Apple Watch vaovao amin'ny titanium sy seramika ho an'ity fararano ity
Apple dia afaka nandefa ity fararano ity modely roa an'ny Apple Watch vita amin'ny seramika sy titanium, ho fanampin'ny vy sy alimo
Apple nitory orinasa tamin'ny famoronana replika iOS tonga lafatra
Ny orinasa Corellium dia notorian'ny Apple noho ny varotra nataony tamin'ny replika mitovy amin'ny iOS nefa tsy nahazo alalana hanao izany.
Ny 10 septambra no daty mety hahitana ny iPhone 11
Sary iray miseho ao amin'ny iOS 13 Beta farany izay toa manamafy ny 10 septambra ho datin'ny hetsika fampisehoana iPhone 11
Loko vaovao, tsy misy "iPhone" ao aoriana ary misy bateria bebe kokoa ho an'ny iPhone vaovao 2019
Misy fivoahana vaovao amin'ny iPhone 11 manaraka, miaraka amin'ny bateria lehibe kokoa, loko vaovao ary mitazona ny mpampifandray Lightning.
Telo taona an-tranomaizina noho ny fivarotana fitaovana Apple sandoka
Any Chine, nisy fepetra henjana noraisina momba ny fivarotana sy fanondranana olona an-tsokosoko ireo fitaovana Apple sandoka. Amin'ity indray mitoraka ity ...
Apple dia mety niara-niasa tamin'i Spotify mba hahatonga an'i Siri hilalao ny hirany
Spotify dia mety misy resaka miaraka amin'i Apple hahafahan'i Siri milalao hira amin'ny alàlan'ny serivisiny noho ny SiriKit.
LIFX Candle Color sy Z TV, jiro marani-tsaina roa vaovao amin'ity fararano ity
LIFX dia nanambara ireo vokatra roa vaovao ho an'ity fararano ity, tariby LED hametrahana ao ambadiky ny fahitalavitra sy jiro labozia maro loko.
Mitandrema amin'ny telegrama ampifandraisinao amin'ny iPhone
Androany dia misy safidy maro ho an'ny hackers hiditra amin'ny solosainantsika, ny iray amin'izy ireo dia manova ny tariby Apple original.
Readdle dia mandefa PDF Expert 7 ary misy famandrihana PRO
Readdle dia namoaka PDF Expert 7 nanampy isa maro an'isa fampiasa ary andiana fiasa PRO amin'ny alàlan'ny fividianana ao anaty app.
IPad Pro miaraka amina fakan-tsary telo dia mety ho tonga amin'ity fararano ity
Ity fararano ity dia mety ho tonga iPad Pro vaovao miaraka amina lens telo ary 2019 "iPad 10,2 miaraka amina fakan-tsary roa, amin'ny fomban'ny iPohne XS ankehitriny.
Apple dia namporisika ny mpanjifa taloha Apple Music hiverina amin'ny serivisy
Apple dia mandefa mailaka amin'ireo mpanjifa teo aloha tao amin'ny sehatra Apple Music mba hamporisihana azy ireo hiverina miaraka amin'ny iray volana malalaka.
Apple dia manomboka mivarotra ireo gara vaovao vaovao misy fitaovana marobe an'i Mophie
Apple dia manomboka mivarotra ny cradles multi-fitaovana Mophie, mazava tsara fa nahazo tsindrimandry avy amin'ny cradles Nomad mahomby
Apple handefa iPad azo aforitra aloha, iPhone ho avy eo
Apple dia afaka nandefa ny fitaovana fampirimana voalohany tamin'ny taona 2020, na dia iPad aza izy io, mila miandry ela kokoa vao mahita ny iPhone voalohany miaraka amin'ity haitao ity.
Ireto ny sasany amin'ireo vaovao momba ny Apple Card
Apple dia nanomboka nanakodia ny Apple Card ary ireto no sasany amin'ireo fiasa vaovao avy amin'ny fifanarahana mpanjifa Goldman Sachs.
Disney + dia hanao izay hahasarotana an'i Netflix
Disney + dia nanambara fonosana iray misy ny serivisy miampy ny ESPN + sy Hulu $ 12,99. Tonga any Espana izy amin'ny tapany voalohan'ny taona 2020.
Apple dia miatrika fitsarana vaovao amin'ny fampihenana ny iPhones
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2018, ny iray amin'ireo resabe izay mety hisy fiatraikany amin'ny orinasa dia navoaka ny foibe ...
Apple dia tsy hanova ny vidin'ny vokatra vokariny noho ny sarany Trump
Nanome toky i Mig-Chi Kuo fa tsy hiova ny vidin'ny vokatra Apple manoloana ny vidin'ny governemanta Trump vaovao.
Ny abidia izao no orinasa manana vola be indrindra manerantany, mialoha an'i Apple
Ny fanadihadiana farany dia milaza fa ny Abidia dia orinasa manana tahiry vola lehibe indrindra manerantany, noho izany dia nihoatra ny Apple, Microsoft ary Amazon.
Azonao atao izao ny miala amin'ny Alexa eavesdropping ataon'ny mpiasa Amazon
Lazainay aminao ny fomba fanilihana ny fisokafan'ny resadresaka ataonay amin'ireo mpiasan'ny Amazon amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS.
Spotify dia nanambara fa manana mpampiasa 108 tapitrisa manana famandrihana Premium
Spotify dia nanambara fa nahatratra 108 tapitrisa ireo mpampiasa manana fisoratana anarana Premium ary maherin'ny 230 tapitrisa ireo mpampiasa mavitrika.
Afaka mandray TV Movistar ianao izao nefa tsy ho mpanafika Telefónica.
Telefónica dia nanambara ny sehatra horonantsary Movistar + Lite amintsika volana vitsivitsy lasa izay ary zava-misy izany ankehitriny. Ilay goavambe Espaniola ...
Toy izany koa ny valin'ny Q3 ho an'ny Apple. Nahatratra avo indrindra ny serivisy
Ao amin'ny Apple dia efa manana ny valiny ara-bola amin'ity Q3 ity izy ireo ary toa tamin'ity telovolana ity dia nahomby tamin'ny zavatra rehetra izy ireo.
Apple dia manatevin-daharana ny Data Transfer Project miaraka amin'ny Twitter, Facebook ary Google
Manatevin-daharana ny Data Transfer Project miaraka amin'ny Microsoft, Facebook, Google ary Twitter i Apple miaraka amin'ny tanjona mba hahatonga ny Internet ho toerana azo antoka kokoa.
Ny efijery amin'ny iPhone XI manaraka dia avy amin'ny Samsung sy LG.
Ny efijery amin'ny iPhone XI manaraka dia avy amin'ny Samsung sy LG amin'ity taona ity, hivoatra amin'ny taona ho avy miaraka amin'ny mpanamboatra sinoa BOE.
Ity ny zava-baovao ao amin'ny iOS 5 beta 13
Lazainay aminao ny vaovao rehetra ananan'ity beta fahadimy an'ny iOS 13 ity, beta tena voadio izay manaitra anay.